Asọmpi Onye mmeri
Blọọgụ egwuregwu ama ama
Kedu mgbe ịlaghachi na egwuregwu mgbe ịwa ahụ gallbladder?
Category: otu 0
Kedu mgbe ịmaliteghachi egwuregwu mgbe mwepụ gallbladder gasịrị? A naghị atụ aro mmega ahụ siri ike ma ọ bụ omume egwuregwu tupu ụbọchị 15 mgbe ọrụ ahụ gasịrị. Iweghachi kwesịrị ịbụ...
Kedu ka esi maliteghachi egwuregwu mgbe afọ 5 gachara?
Kedu ka esi maliteghachi egwuregwu mgbe afọ 5 kwụsịrị? Mweghachi nke mmemme egwuregwu ga-abụrịrị na ọ ga-aga n'ihu: ọ dị mkpa ịmalite na mmemme dị nro (ịgba ígwè, ije ije), ihe gbasara…
Kedu ka esi eji nwayọ malite egwuregwu ahụ ọzọ?
Kedu ka esi maliteghachi egwuregwu na-emerụghị onwe gị ahụ? Ime mkpebi dị mma na ịmaliteghachi mmemme egwuregwu bụ ihe dị mma. Mana ịnọgide na-aga n'ihu bụ ...
Kedu ka esi maliteghachi egwuregwu mgbe ọnwa kwụsịrị?
Kedu ka esi maliteghachi egwuregwu mgbe otu ọnwa gachara? Hazie ihe omume gị dị iche iche. Ọ bụrụ na ịga mgbatị ahụ ugboro atọ n'izu, dịka ọmụmaatụ,…
Ajụjụ: Gịnị kpatara ịlaghachi n'egwuregwu ji esi ike?
Kedu ka esi amalite egwuregwu ọzọ? Ịmalite ọrụ egwuregwu kwesịrị ịdị na-aga n'ihu: ọ dị mkpa ịmalite na mmemme dị nro (ịgba ígwè, ije ije), ihe dịka awa 3 kwa ...
Kedu ka esi maliteghachi egwuregwu mgbe ọnwa 3 gachara?
Kedu ka esi eme mgbake egwuregwu dị mma? Maka nlekọta anụ ahụ ị nwere ike ime obere oge nke nkeji iri na ise kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ị…
Kedu ka esi maliteghachi egwuregwu mgbe ogologo ezumike gasịrị?
Kedu ka esi maliteghachi egwuregwu mgbe ogologo oge adịghị arụ ọrụ anụ ahụ? Nke a bụ ndụmọdụ iri iji duzie gị. Jụọ onwe gị ajụjụ ndị ziri ezi tupu ịmalite. … Mee otu…
Kedu ka esi maliteghachi egwuregwu mgbe ọnwa 2 gachara?
Kedu ka esi maliteghachi egwuregwu mgbe ezumike otu ọnwa gasịrị? Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị bụ onye egwuregwu bọọlụ, zere ịmalite ozugbo na egwuregwu (ike), hazie oge ọzụzụ ole na ole…
Kedu ka esi zere mgbu mgbe egwuregwu gasịrị?
Kedu ka ị gaghị enwe ihe mgbu mgbe egwuregwu ahụ gasịrị? Ndụmọdụ 7 iji zere mgbu mgbe egwuregwu gasịrị Na-ekpo ọkụ tupu ọzụzụ. … Hichaa uru ahụ gị, tupu na mgbe…
Kedu ka esi kwụsị mgbu mgbe mgbatị ahụ gasịrị?
Kedu ka esi zere mgbu mgbe egwuregwu gasịrị? Ndụmọdụ 7 iji zere mgbu mgbe egwuregwu gasịrị Na-ekpo ọkụ tupu ọzụzụ. … Hichaa uru ahụ gị, tupu…
1 2 ... 2,297 Osote
Aha m bụ Alan. Nnọọ na blọọgụ egwuregwu m. N'ebe a, onye na-agụ ga-ahụ akụkọ egwuregwu kachasị ọhụrụ, nyocha asọmpi, ajụjụ ọnụ ndị egwuregwu, asọmpi ụwa na Europe. Egwuregwu bọọlụ, hockey ice, basketball na asọmpi egwuregwu ndị ọzọ.
Ajụjụ a na-ajụkarị: onye meriri na rugby?
Kedu ka esi etinye aka na Champions League?
Azịza kachasị mma: Kedu ka esi esi banye ebe a na-azụ rugby?
Kedu ka ị ga-esi bụrụ ezigbo onye egwuregwu bọọlụ?
Ajụjụ a na-ajụkarị: Otu esi elele egwuregwu bọọlụ ochie?
Kedu ka ọkwa ọkwa egwuregwu hockey si arụ ọrụ?
Kedu ka ị ga-esi ghara itolite apata ụkwụ mgbe ị na-egwu egwuregwu?
© 2022 asọmpi
Kpachara anya maka ndị ji ikike! A na-etinye ihe niile na saịtị ahụ maka ebumnuche ozi na agụmakwụkwọ! Ọ bụrụ na ị kwenyere na ikenye ihe ọ bụla na-emebi ikike nwebisiinka gị, jide n'aka na ị ga-akpọtụrụ anyị site na mpempe kọntaktị na a ga-ewepụ ihe gị!